Akpa ozi, akpa nkata, akpa komputa - Camei Ele & ebe
Bode obere akpa
Ihe mkpuchi Zipa
Ngosipụta nke ngwa ahia
A na-eme ngwaahịa anyị tumadi na arụ ọrụ 2: na oke ọrụ ugboro ugboro dị ka akpa akpa, ihe mgbanaka, bọọdụ mpịakọta, akpa pensụl, akpa nchekwa; n'ihe eji etinye ube dị ka pọtụfoliyo, mkpọchi mkpọ, pensụl, akpa ụlọ ahịa, akpa ịchọ mma, akpa kọmputa wdg.
Pope 3181 Pensụl
Ihe omuma nke ihe omuma nke NO.: 3181 Pensụl.
3179 Pepe Mpempe Pensụl abụọ
Ihe omuma nke isi nke NO: 3179 Zipa Pepa
Njide jidere 3188
Ihe omuma nke ihe omuma NO: 3188 Card Holder ...
3154 Okpokoro Foto
Ihe omuma nke ihe omuma nke NO: 3154 Okpokoro Photo ...
Akpa nchekwa 3140
Ihe omuma nke ihe di nkpa. NO: apoodu 4040 ...
2985 ite Pensụl
Ihe omuma nke nkiti. : 2985 Pensụl ite M ...
Ihe omuma nke nkiti. : 2952 Pọtụfoliyo Ma ...
Ihe omuma nke ihe omuma nke NO: 2806…
E guzobere akpa Quanzhou Camei Station na 2003, nke bụ ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ azụmaahịa, ọkachamara na mmepe, n'ichepụta, ire nke akpa na ụlọ ọrụ. Anyị agafeela asambodo nke ISO9001, BSCI, SEDEX, yana nyocha nke ọtụtụ ụlọ ọrụ mba ọzọ a ma ama (dị ka Walmart, Office Depot, Disney, wdg). A na-eme ngwaahịa anyị tumadi na arụ ọrụ 2: na oke ọrụ ugboro ugboro dị ka akpa akpa, ihe mgbanaka, bọọdụ mpịakọta, akpa pensụl, akpa nchekwa; na strawing ọrụ dị ka Pọtụfoliyo, mkpọchi igbe, pensụl pọọsụ, akpa ụlọ ahịa, akpa ịchọ mma, akpa kọmputa wdg. companylọ ọrụ anyị nwere onwere ikike nke imewe na ịzụlite, enwere ọtụtụ akpa akpa, ọmarịcha ụdị, ụdị mma. A na-ebubata ya n'ọtụtụ mba na mpaghara dịka Europe, United States, Japan, wdg. Enweela ezigbo aha mba niile.
Kemgbe e guzobere ya, ụlọ ọrụ anyị na - emepụta ngwaahịa mbụ nke ụwa na-agbaso ụkpụrụ nke ịdị mma na mbụ. Ngwaahịa anyị enwetawo aha dị mma na ụlọ ọrụ yana ntụkwasị obi bara uru n'etiti ndị ahịa ọhụrụ na ndị agadi. A na-ere ngwaahịa anyị nke ọma na ụlọ na nke ọdụ ụgbọ mmiri, gụnyere Europe, America, ndịda ọwụwa anyanwụ, Middle East na mba na mpaghara ndị ọzọ. Anyị na-etinyekwu uche na amụma nke njikwa iguzosi ike n'ezi ihe, uru na ndị ahịa ụzọ mbụ; Companylọ ọrụ anyị anọwo na-akwụ ụgwọ mgbe nile iji bụrụ ndị nwere ihe okike na ntụkwasị obi; Anyị ji obi anyị niile chọọ ijide ndị ọhụụ na ndị agadi ọhụụ iji wulite ọmarịcha ọla anyị!
Nlekọta njikwa arụmọrụ Camei 2020 ...